सिक्दैछु जिउन जिन्दगी-Nagarikaawaj.com
सिक्दैछु जिउन जिन्दगी
शनिबार, माघ २५, २०७०
साच्चीकै जीवनको परिभाषा दिन एकदमै कठिन छ । जीन्दगीको परिभाषा खोज्दै जाँदा बाटामा हिंड्ने बटुवालाई सोधे जीवन के हो ? उत्तर आउँछ, ‘‘भारी बोक्ने साधन हो ।’’ त्यही प्रश्न महलमा बस्नेलाई सोधे, उत्तर आउ“छ ‘‘बिलासी जीवन जीउने साधन हो ।’’
हो यी दुई व्यक्तिको भनाइ कति फरक छ । आखिर जीन्दगीको परिभाषा मान्छे पिच्छे फरक हु“दोरहे छ । आखिर मान्छे मान्छेनै हो तर यति धेरै किन फरक परे होला ? आखिर एउटा बटुवाले अर्कोको भारी बोक्दाबोक्दै उसको मृत्यु हुन्छ । तर त्यो बटुवाले पनि संर्घष गरेको थियो नि । किन सम्पन्न बन्न सकेन ? हो आज तिनै बटुवास“ग हिड्ने साथी सम्पन्न छन् । उनी महलमा सजिएका छन् । खै त्यो साथी कसरी सम्पन्न भयो ? थाहा छैन । नत उसको उद्योगधन्दा नै थियो नत कुनै व्यवसाय नै थियो । खै कसरी ? ऊ रातारात सम्पन्न बन्न पुग्यो थाहा छैन ? हो यी शब्द आफैमा गौण छन् । तर पनि साेंची रहन्छ । आखिर किन फरक भयो ? जसले जीवनभरि संर्घष ग¥यो । ऊ सम्पन्न बन्न सक्दैन, तर उसलाई एकपछि अर्को गरी दुःख परिनै रहन्छ । समधान गर्ने उपाय खोज्छ तर सक्दैन । अनि भन्छ बेकार छ जीन्दगी ।
के मान्छे जन्मन र मर्नलाई मात्र हो ? किन यस्तो देखिन्छ मान्छे ? के पसिना बगाउने मानिस सम्पन्न बन्न सक्दैन ? किन पछाडि परिरहन्छ ? जीवनमा हरेक चिज बन्न मन लाग्छ । बिरामी हुदाँ डक्टर बन्न मन लाग्छ । हिड्न पर्दा पाइलट बन्न मन लाग्छ । घरिघरि वैज्ञानिक बन्न मन लाग्छ । कसैले आक्रमण गर्दा हतियार बन्न मन लाग्छ । अनि के नपुगे नपुगे जस्तो लाग्छ, भन्छु अनि बेकार छ जीन्दगी । आफूस“गका कैयौं साथीहरु डक्टर, पाइलट, इन्जिनियर, सुब्बा भइसक्दा पनि मलाई अझै पनि के बन्ने दोधारमा छु । केही बेर सोच्छु अनि भन्छु बेकार छ जीन्दगी ।
जीवन सरल होस् सुख होस् जो कोहीको पनि चाहाना हुन्छ । जीवनलाई हरेकपल्ट रमाइलो बनाउने कोशिस गरिन्छ । तर त्यही जीवन कहिले सुख बनेर आउँछ बहिले दुःख बनेर आउँछ । पक्कै पनि साेंच्न सकिदैन । जीवन चुनौतीको र अवसरको बीचमा पनि छ, जीवन सुख र दुःखको बीचमा पनि छ । जीवन घटना र दुर्घटनाको बीचमा पनि छ । त्यसैले जसले समयमा नै परिर्वतनलाई चिन्न सक्छ । पक्कै पनि त्यो सफलताको अघाडि बढन सक्छ । जीवनका प्रत्येक घटनाहरुले मलाई संवेदनशील भएर सोंच्न बाध्य बनाउँछ । जब गहिरिएर ती सबैलाई केलाउने गर्छु तर सोंचे जस्तो हुँदो रहेनछ ।
मेरो जीवनमा जे जति घटना घटे, त्यसले जीवनमा केही मात्रामा चुनौती थपिदिएको छ त कतै प्रेरणाको स्रोत पनि बनेको छ । हो आज तिनै घटनालाई स्मरण गर्छु, जसले मलाई यहाँसम्म ल्याई केही उचाई थपिदिएको छ । यसभन्दा पहिले यही दैनिक पत्र मार्फत ‘न्याय नपाउ“दाको क्षण’ प्रकाशित गरेको थिएँ । जसले अर्को घटना लेख्न उत्प्रेरित गरेको छ । पक्कै पनि तपाईलाई लाग्न सक्ला यति सानै उमेरमा कस्तो घटना घटेको रहेछ भनेर । तर के गर्ने जीवनलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति घटना घटनै पर्दो रहेछ । यदि घटना एक दुईवटा घटेनन् भने के जीवनको सार्थकता रहला र खै ? विगतका ती क्षणहरु सम्झिदा सपना जस्तो लाग्न थालिसक्यो ।व्याख्या गर्दा दन्त्य कथा जस्तो लाग्छ । दिन आफनै गतिमा दैडिरहेका छन् । समय पस्थितिहरु कति छिटै सोच्दै नसाेंचेको क्षणमा बदलिदा रहेछन् । विगतलाई र र्वतमानलाई कसरी बुझ्ने । यही दोसाँधमा अप्ठयारो लागिरहेको छ । मैले अनुभूति गरें मान्छे भएर जन्मेपछि र मन मुटु र मानवता बोक्नै पर्दो रहेछ । नचाहेर पनि मृत्युमा रुदोंरहेछ । मन, घोंच्दो रहेछ । मुटु र दुख्दो रहेछ । मानवता, त्यही मानवता खोजिरहन्छु । एमाओवादी शान्ति प्रक्रियामा खाएको धेरै वर्ष भई सक्यो तर पनि शान्तिको अनुभूति गर्ने खोजे पनि यदाकदा सम्झाना दिलाइदिन्छ ।
कापी, कलम समाउने हातमा बन्दूक बोकेर हिड्नेहरु उनीहरुमा कुनै स्वार्थ थिएन । स्वार्थ अरुले लुटिरहेका थिए । आखिर ज्यान गुमाउनेले के पायो त आज ? तिनीहरुको आत्माले पोलिरहेको छ । सरकार पक्ष र माओवादी बीच २०५२ सालबाट द्वन्द्व चलेको थियो । एउटै नेपाली आमाका सन्तान एक आपसमा लडिरहेका थिए । यसरी चलेको द्वन्द्वले कतिको काख रित्याएको छ त कति बालबच्चा टुहुरा बनाएको छ । कसैको सिन्दूर पुछिएको छ । अहिले जस्तो सञ्चार माध्यमको विकास भैसकेको थिएन । कुनै घटनाको लागि हामीले रेडियो नेपाल सुन्नु पर्ने त्यो पनि यदाकता मानिसको घरमा मात्र हुन्थ्यो र गाउ“का भद्र भलाद्मीस“ग मात्र हुन्थ्यो । सबैजना जम्मा भई सुन्ने गरिन्थ्यो । सानै भएको भएर होला किन लडिरहन्छन् दाजु भाइ यतिजना मरे उतिजना मरे भन्दा सा“च्चै आँखाबाट आ“सु झार्नुबाहेक केही थिएन । खै के चाहान्थे मार्नेहरु । तर आज उनीहरु यो धर्तीमा नरहे पनि उनीहरुको चित्कार आत्माले पोलिरहेको छ ।
घटना अघाँखा“ची पोखराथोक ५ स्थित एउटा डाँडामा सानो टिनले छाएको घर थियो । आठ दश जनामा रहेका नेपाल प्रहरी थिए । घटना २०५८ सालको साउन महिनाको सेरोफेरोमा भएको थियो । त्यही डाँडाको तलपट्टि हाम्रो घर बन्दै अवस्थामा थियो ।
साउन महिनाको समय सिमसिम वर्षा, बोटबिरुवा कलकलाउ“दो हरियो बारीमा मकैले सुत्ला फाल्न थालेको समय सिरसिर बतास चलिरहेको थियो । के थाहा हामीलाई अब यहाँको पालो । तर अन्तिम मिति आएपछि छेकेर छेकिदो रहेनछ । डाँडामा रहेका प्रहरी र हामी एउटै परिवार जस्तो लाग्थ्यो । जताततै लडाइ“को खबरले त्यहा“ पनि त्रास उत्पन्न भएको थियो । के गर्ने सरकारी नुन पानी खाए पछि ? ज्यानको बाजी राखेर परिवारदेखि टाढा भएर बस्नु पर्ने । कस्तो कर्म ? झनै यो जागीरस“ग वा गोलीस“ग पैठेजोरी खेल्नै प¥यो । रातीको समय थियो सिमसिम पानि परिरहेको थियो । एकादममा बाहिरबाट आवाज आयो ‘‘लड्छस् कि आत्म सर्मपण गर्छस् ?’’ तर ती आठ दशजनामा रहेका प्रहरीलाई पनि लड्ने आदेश आयो । हजारौं संख्यामा आएका ती माओवादीहरु र प्रहरी जम्मा दशजनाको समूहमा लडाइ“ शुरु भयो । त्यति बेलासम्म हामी डरले कामी रहेका थियौं । एकाएक गोलीका आवाजले घर थर्किन थाल्यो । मार.. मार ..ठोक.. ठोक.. आवाज दोहोरियो । गोली हाना हान । कतै आमा ..पानी.. भनी चिच्याएको आवाज त कतै बम र गोलीको आवाज लाफैमाथि गोली चलेजस्तो लाग्न थाल्यो । मलाई ती गोलीका आवाजले अत्यन्त त्रसित बनायो । साउन महिनाको समय जाडोले मुटु कामी रहेको छ त यता बाच्ने आशा पनि क्षण भरमा सिद्धिन थाली सक्यो । राती बाह्र बजेबाट शुरुभएको लडाइ“ बिहान पाँचबजे मात्र रोकियो । बिहान छ बजे उठ्दा आकाशमा आगोको मुस्लो दन्किएको छ । सानै चैकी पनि क्षतविक्षत अवस्थामा छ । जताततै गोलीका खोकाहरु छरिएका थिए । बारीका मकै लम्पसार परेका छन् । केही समयपछि जानाकारी भयो । नेपाल प्रहरीमा कार्यरत दुई जवानको मृत्यु भएको रहेछ र तीनजना घाइते भएका रहेछन् । योे खबरले सर्वत्र सन्नाटा र स्तब्धता छायो । लाग्छ, आज आकाशका तारा पनि रोइरहेका छन् । सधैजसो चल्ने हावा पनि मौन देखिन्छ । बोट बिरुवा पनि स्तब्ध अवस्थामा देखिन्थे । त्यो दिन सारा गा“उ स्तब्ध थियो ।
कसैमा बोल्ने आँट थिएन । धेरै बेरपछि बा“च्न सफल प्रहरी आएर शवलाई एकै ठाउ“मा राखी आफ्नो हेडक्वाटर जिल्ला सदरमुकाममा फोन गरे । केही क्षणपछि हेलिकप्टर आयो । घाइते प्रहरीलाई सदरमुकाम लगि उपचार ग¥यो । वैवाहिक बन्धनमा बा“धिएको केही समय नबित्दैै पखालिएको सिन्दूरको क्षण कस्तो भयो होला ? मुटुको टुक्रा छोराछोरी युद्धमा ढलेको बेला आमाको मन कस्तो भएको होला ? पैसा कमाएर घर फर्केला भन्ने छोराको घर अघाडि लाश आउ“दा आमाको मुटु कस्तो भयो होला ? साच्चै त्यो क्षण सम्झिदा आङ्ग सिरिङ हुन्छ । अझै पनि दुई दिनपछि सदरमुकामबाट नेपाल आर्मी गाँउका सबै गाई, भैसी, बोटबिरुवा सबै माओवादी भन्दै गाँउका मेरो बाबा लगायत बीस बाईसजना व्यक्तिलाई समातेर एउटै चिहान बनाउने भनेर सदरमुकामतिर लग्यो । फेरि अर्को दशा लाग्यो । गाँउका सबै पुरुष व्यक्तिलाई मार्ने भनेर लगेपछि एकाएक रुवाबासी चल्न थाल्यो ।
हुरिबतास, आकाश गडाङ्गुडुङ् गर्न थाल्यो । हो, मैले त्यो क्षणको दृश्य यस पेपरका उर्तान सक्दिन । एकाएक गाँउमा कोलाहाल मच्चियो । हाम्रो कुनै आँसु झार्नुबाहेक अर्को विकल्प थिएन । आखिर हाम्रो के गल्ती थियो र हामीलाई अपहरण गरियो ? दुई चार दिनसम्म कुनै खबर आएन । एक हप्तापछि बल्ल थाहा भयो जिल्ला प्रशासन कार्यालय सन्धिखर्क लगेको छ । लगेको बीस दिनपछि तारिखमा आउने भन्दै पठाइदियो । सा“च्चै ती दृश्य देख्दा शरीरमा हानेको छाप, बन्दूकका कुन्दाले हानेको शरीर आजसम्म पनि चस्किरहन्छ । भाग्य संयोग ! आजसम्म ती शरीर बा“चीरहेका छन् ।
जुन जीवनमा यस्तो क्षण पनि आउ“दो रहेछ । ती क्षणहरु अविस्मरणीय भएर बाँकी जीवनलाई झस्काइ रहन्छन् । वास्तवममा जीवन भनेको अरु केही रहेनछ । यो त घटनै घटनाको शृङ्खला समेटिएको एउटा किताब पो रहेछ । फरक यति कुनै घटना साना हुन्छन् त कुनै ठूला । कसैकालागि कम महत्वका होलान् कसैका लागि त्यही घटना अहम महत्वको हुन जा“दो रहेछ । एउटा पहाडको नेटो काटेर अग्लो चौपारीको शीतल छाहारीमा बसी चारैतर्फ दृश्यहरु हेर्दा नत गन्तव्यको टुंगो हुन्छ न त आफू हिंडेर आएको बाटोको छेउको भेउ मिल्छ । त्यति नै थाहा हुन्छ बाटो कति लामो छ भनेर । तर वास्तवमा जीवनको बाटो कति लामो छ भन्ने कुरा थाहा हु“दो रहेछ । जीवन जति धेरै संघर्ष ग¥यो त्यति नै बढी जीवनको सार बुझ्न सकिदोरहेछ । त्यसैले हो जीवन हरेक व्यक्तिको बुझाइमा फरक फरक हु“दोरहेछ । जीवनका जन्मेका कालदेखि र्वतमानसम्मका सुखद र दुखद क्षण तथा घटनाहरुलाई स्मरणको डोरिले सिउरेर स्मृति पटलको च्याम्बरभित्र जीवन कहानीहरु बोकेर हिंड्न विवश छौं ।